आइसियूमा पुग्ने संक्रमित बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढ्दै | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आइसियूमा पुग्ने संक्रमित बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढ्दै
आइसियूमा पुग्ने संक्रमित बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढ्दै
भदौ ६ गते, २०७७ - ०८:०७
शुक्रबार मात्रै देशभर १३३ जना संक्रमित आइसियू र १५ जना भेन्टिलेटरमा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितमा लक्षण देखिने क्रम बढ्दै गएको छ भने उनीहरू आइसियू र भेन्टिलेटरमा पुग्ने क्रम पनि बढेको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका संक्रमितमध्ये ६ प्रतिशतमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने केही फरक पाइएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका संक्रमितमध्ये २० प्रतिशतमा लक्षण देखिएको कोरोना नियन्त्रणमा क्रियाशील अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
लक्षण देखिएसँगै सघन उपचार कक्ष आइसियू र भेन्टिलेटरमा पुग्ने संक्रमितहरू पनि बढेका छन् । योसँगै मृत्यु हुने क्रम पनि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चिकित्सकहरूले भेन्टिलेटरमा पुगेका संक्रमित पुरानै अवस्थामा फर्कने सम्भावना ज्यादै कम हुँदै गएको बताएका छन् । तीव्र रूपमा फोक्सोमा असर गर्ने भएकाले लक्षणसहितका संक्रमितलाई बढी असर गरेको पाइएको छ ।
शुक्रबार मात्रै देशभर ११ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बिहीबार र बुधबार ६–६ तथा मंगलबार सात र सोमबार तीनजनाले ज्यान गुमाएका थिए । शुक्रबार मृत्यु भएका एक महिला र १० पुरुष मोरङ, पर्सा, बारा, सप्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, दोलखा र प्युठानका हुन् । योसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक सय ३७ पुगेको छ ।
दैनिक आइसियूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै
सघन उपचार कक्ष (आइसियू) र कृत्रिम श्वासप्रश्वास भेन्टिलेटरमा पुग्ने संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेको छ । शुक्रबार मात्रै देशभर एक सय ३३ जना संक्रमित आइसियू र १५ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५२ जनालाई आइसियूमा राखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ मा १६, प्रदेश २ मा ४६, गण्डकी प्रदेशमा ६ र प्रदेश ५ मा १३ जना संक्रमित आइसियूमा छन् । बागमती प्रदेशमा १५ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नगिराउन निजी अस्पताल र चिकित्सक संघको सरकारलाई चेतावनी
नेपाल चिकित्सक संघले कोभिड महामारीका वेला चिकित्सकको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै गुनासो गरेको छ । यो विषम परिस्थितिमा अग्रपंक्ति रहेका चिकित्सकलाई हौसला दिनुको सट्टा कसरी मनोबल थप कमजोर गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारी लागेको संघको आरोप छ ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाउने व्यवहार बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समय जुन हिसाबले निजी अस्पतालमाथि फरक व्यवहार गरिँदै छ, त्यसले पनि राम्रो सन्देश नदिएको अध्यक्ष डा. कार्कीले बताए ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल र चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच मन्त्रालयको व्यवहारका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बैठक समेत बसेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई दिनअघि मात्रै निजी अस्पताल मर्ज गराउने उद्देश्यले २० प्रतिशत आइसोलेसन बेड अनिवार्य रूपमा छुट्याउन परिपत्र गरेको थियो ।
भदौ ६ गते, २०७७ - ०८:०७ मा प्रकाशित